ဈေးရောင်းကာစကြုံတွေ့ရတဲ့ အဆင်မပြေမှူ့တွေကို ပြောပြလာတဲ့ သရုပ်ဆောင် ပိုးအိအိခန့် – Cele Top Stars
ဈေးရောင်းကာစကြုံတွေ့ရတဲ့ အဆင်မပြေမှူ့တွေကို ပြောပြလာတဲ့ သရုပ်ဆောင် ပိုးအိအိခန့်
September 2, 2021 By admin2News
ချစ်လှစွာသော ပရိသတ်ကြီးရေ သရုပ်ဆောင် ပိုးအိအိခန့် ကတော့သူ့ရဲ့မိသားစုနဲ့အတူ ဘန်ကောက်မြို့တွင်အခြေချနေထိုင် နေပါတယ်။ ဘန်ကောက်ကို မ ပြောင်းရွေ့မီ မြန်မာနိုင်ငံတွင်နေထိုင်ခဲ့စဉ်အတွင်းမှာ အထည်တွေရောင်းချခြင်းဖြင့် တစ်ဖက်တစ်လမ်းကနေ စီးပွားရှာခဲ့ပါတယ်။ အနေအေးတယ်လို့ ထင်ရပေမယ့် သူ့ကိုစော်ကားလာရင်တော့ လုံးဝသည်းမခံဘဲ ပြန်ဖြေရှင်းတတ်သူတစ်ယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်..။
ဈေးရောင်းခဲ့စဉ်က ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ အမှတ်တရဖြစ်စဉ်လေးတွေကို ပိုးအိအိခန့်မှ ပြန်ပြီး ရေးသားပြောပြလာခဲ့ပါတယ်။ “ “ အမှားထဲက နောင်တ ”တကယ်တော့ လူနှစ်ယောက် ပြဿနာတက် အချင်းများတယ်ဆိုတာက ကိုယ့်ဘက်ကိုပဲ ကိုယ်ကြည့်ပြီး သူ့ဘက်သူ့နေရာကို ဝင်မကြည့်တဲ့ အခါမျိုးတွေမှာ စကားများတတ် ပါ တယ်ပြောရမယ်ဆို ကိုယ့်ဘက်က ကြည့် လက်ဖမိုး သူ့ဘက်ကကြည့် လက်ဖဝါး ဆိုသလိုပေါ့ကျွန်မ live sale တွေ စရောင်းစဉ်အခါကပေါ့ ကျွန်မ customer တစ်ဦးနဲ့ စကားလေးအဆင်မပြေဖြစ်ခဲ့ဖူးတယ် (စာရိုက်ပြီးပဲဖြစ်တာပါ) ကျွန်မ အကျင့်က ကိစ္စတစ်ခု ရှိပြီဆို ဒီအလုပ်ကိစ္စကို ပြီးပြတ်အောင်လုပ်ပြီးမှ စားဝင်အိပ်ပျော်တယ် စာကျက်ရင်လည်း တစ်ပုဒ်လုံးရမှ အဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့တုန်းကလည်း ကျွန်မ ကတစ်နေ့ရောင်းလို့ရသမျှ အော်ဒါတွေအကုန်ကို တစ်ညထဲနဲ့ အပြီး သတ် စာရင်း လုပ်ချင်တယ် ညစာရင်းလုပ် မနက်ကို အော်ဒါ တင်တာတင် deli အပ်စရာရှိတာအပ်ပေါ့အော်ဒါတွေက အရမ်းများ လူကလည်း စလုပ်ခါစက လည်းဖြစ်တော့ ညတွေမအိပ်မနက်လင်းအားကြီး ၄ / ၅ နာရီလောက်မှ အိပ် မနက်ဆို နေ့လည် ၁၂ လောက်မှ ထ အဲ့လိုမျိုး လုပ်ခဲ့တာပေါ့တစ်ရက်ကျတော့ customer တစ်ဦးက ကျွန်မဆီက အထည်တွေ အများကြီးအားပေးတယ် သောင်းဂဏန်းရောင်းတဲ့အထည်ကို သိန်းချီဖိုးအားပေးတယ်..။
အဲ့တော့သူငွေကြိုလွှဲဖို့လိုရော လိုတော့သူကမနက်စောစော ငွေလွှဲလိုက်တယ်ထင်ပါတယ် ကျွန်မကို ဖုန်းတွေဆက်ပါ လေရော…. မကိုင်မချင်းဆက်တာ … ကျွန်မ အကျင့်ကလည်း လိုင်းမပိတ်တဲ့အကျင့် (ခုတော့လိုင်းပိတ်အိပ်နေပြီ😄) ဖုန်းကို ခေါင်းနားထားအိပ်တဲ့အကျင့် (ထားတုန်းပဲ ဖုန်းတော့😛) သူက တဂွမ်ဂွမ်ဆက် ကိုယ်က ညကမအိပ်မိုးလင်းမှအိပ်ရနဲ့ ဆက်တိုက် ဆက်တိုက် ဆက်ပါများတော့ (မနက်၈နာရီလောက်ကနေ ၁၁ နာရီလောက်ထိ) မအိပ်ရတဲ့စိတ်နဲ့ တဒင်္ဂ ဒေါ သက စပါလေရောဖုန်းကိုင်ပြီး ဘယ်သူဒီလောက်ဆက်နေလဲ ကြည့်တော့ ငွေလွှဲထားတာဝင်လား စစ်ပေးပါတဲ့ 😩 ကျွန်မလည်း လူကပုတော့ စိတ်ကလည်းသိ တယ်မလား 😖 အမရယ်လို့ ကျွန်မက blue mark ကြီးနဲ့ ရောင်းနေတာပါလို့ အမငွေကိုကျွန်မလိုင်းသုံးတာနဲ့စစ်ပြီး အကြောင်းပြန်ထားမှာပေါ့လို့ တစ်ဖက်က လည်းကျွန်မကလည်း ကျွန်မငွေလွှဲထားတာလေတဲ့ ဝင်မဝင် သိချင်တယ်တဲ့ စသဖြင့် အနည်းငယ်လောက် စကားလေးတွေ အဆင်မပြေ့တပြေပြောကြတယ် နောက်ဆုံး customer right မို့ ကျွန်မကပဲ စကားလုံးလေးတွေ ချိုတဲ့ဘက်ပြောင်းပြီး ရပ်လိုက်ရတယ်တကယ့်တကယ် ပြန်စဉ်းစားကြည့်တော့ သူမှန်တယ်..။
ကျွန်မညမအိပ်ဘဲအလုပ်လုပ်နေတာ သူမသိဘူးသူ့ကိစ္စလည်းမဟုတ်ဘူး သူ့ကိစ္စကသူ့ငွေသူတန်ဖိုးထားတဲ့ ငွေကိုဘာပစ္စည်းမှ လက်မခံရသေးဘဲ ကြိုလွှဲရတာ ဝင် ကြောင်းသက်သေလိုချင်တယ် ဖြစ်သင့်တယ်ကိုယ့်အတွက် ၁ သိန်း ၂ သိန်းက တန်ဖိုးရှိချင်လည်းရှိမယ် ရှိချင်မှလည်းရှိမယ်ဆိုပေမယ့် တစ်ဖက်လူအတွက်တန် ဖိုး အရမ်းရှိနေနိုင်တယ်ဒါကို တစ်ဖက်လူရဲ့နေရာကို မကြည့်ဘဲ ငါညကမအိပ်ရဘူးမနက်မှ အိပ်ရတာကိုဘာလို့ဒီလောက်ဖုန်းဆက်နေတာလဲ မသိဘူးနဲ့ ကိုယ့်အ တွက် ကိုယ်ကြည့်ပြီးတဒင်္ဂစိတ်နဲ့တုံ့ပြန်မိခဲ့တာ ပြန်တွေးကြည့်တော့ ကျွန်မမှားတယ်နောက်နောင်လည်း အမြဲ သူ့ဖက် ကိုယ့်ဖက် ကြည့်ပြီး တဒင်္ဂ ဒေါသကို မ ထွက်ဘဲ နေနိုင်အောင် သတိထားရမယ်အဲ့တုန်းက ဖြစ်ခဲ့တဲ့အမ ဘယ်သူလည်းတော့ မမှတ်မိတော့ပေမယ့် အမက ဒီစာလေးဖတ်မိလို့ မှတ်မိရင် ညီမကပဲ တောင်းပန်ပါတယ် နော် ☺️☺️☺️ Peace နော်အမနောက်ဈေးရောင်းလည်း အားပေးနော်ဘာရောင်းရမလဲတော့ မသိသေးဘူး 😂 P.S ပုံက မျက်နှာငယ် လေးနဲ့တောင်းပန်နေတာပေါ့ 😔😜 ” လို့ ရေးထားပါတယ် ပရိသတ်ကြီးရေ။ဖတ်ရှုပေးကြတဲ့ပရိတ်သတ်ကြီးအားလုံးလည်း သာယာပျော်ရွှင်တဲ့နေ့လေးတစ်နေ့ကို
ခဈြလှစှာသော ပရိသတျကွီးရေ သရုပျဆောငျ ပိုးအိအိခနျ့ ကတော့သူ့ရဲ့မိသားစုနဲ့အတူ ဘနျကောကျမွို့တှငျအခွခေနြထေိုငျ နပေါတယျ။ ဘနျကောကျကို မ ပွောငျးရှမေီ့ မွနျမာနိုငျငံတှငျနထေိုငျခဲ့စဉျအတှငျးမှာ အထညျတှရေောငျးခခြွငျးဖွငျ့ တဈဖကျတဈလမျးကနေ စီးပှားရှာခဲ့ပါတယျ။ အနအေေးတယျလို့ ထငျရပမေယျ့ သူ့ကိုစျောကားလာရငျတော့ လုံးဝသညျးမခံဘဲ ပွနျဖွရှေငျးတတျသူတဈယောကျပဲဖွဈပါတယျ..။
ဈေးရောငျးခဲ့စဉျက ကွုံတှခေဲ့ရတဲ့ အမှတျတရဖွဈစဉျလေးတှကေို ပိုးအိအိခနျ့မှ ပွနျပွီး ရေးသားပွောပွလာခဲ့ပါတယျ။ “ “ အမှားထဲက နောငျတ ”တကယျတော့ လူနှဈယောကျ ပွဿနာတကျ အခငျြးမြားတယျဆိုတာက ကိုယျ့ဘကျကိုပဲ ကိုယျကွညျ့ပွီး သူ့ဘကျသူ့နရောကို ဝငျမကွညျ့တဲ့ အခါမြိုးတှမှော စကားမြားတတျ ပါ တယျပွောရမယျဆို ကိုယျ့ဘကျက ကွညျ့ လကျဖမိုး သူ့ဘကျကကွညျ့ လကျဖဝါး ဆိုသလိုပေါ့ကြှနျမ live sale တှေ စရောငျးစဉျအခါကပေါ့ ကြှနျမ customer တဈဦးနဲ့ စကားလေးအဆငျမပွဖွေဈခဲ့ဖူးတယျ (စာရိုကျပွီးပဲဖွဈတာပါ) ကြှနျမ အကငျြ့က ကိစ်စတဈခု ရှိပွီဆို ဒီအလုပျကိစ်စကို ပွီးပွတျအောငျလုပျပွီးမှ စားဝငျအိပျပြျောတယျ စာကကျြရငျလညျး တဈပုဒျလုံးရမှ အဲ့လိုမြိုးပေါ့အဲ့တုနျးကလညျး ကြှနျမ ကတဈနရေ့ောငျးလို့ရသမြှ အျောဒါတှအေကုနျကို တဈညထဲနဲ့ အပွီး သတျ စာရငျး လုပျခငျြတယျ ညစာရငျးလုပျ မနကျကို အျောဒါ တငျတာတငျ deli အပျစရာရှိတာအပျပေါ့အျောဒါတှကေ အရမျးမြား လူကလညျး စလုပျခါစက လညျးဖွဈတော့ ညတှမေအိပျမနကျလငျးအားကွီး ၄ / ၅ နာရီလောကျမှ အိပျ မနကျဆို နလေ့ညျ ၁၂ လောကျမှ ထ အဲ့လိုမြိုး လုပျခဲ့တာပေါ့တဈရကျကတြော့ customer တဈဦးက ကြှနျမဆီက အထညျတှေ အမြားကွီးအားပေးတယျ သောငျးဂဏနျးရောငျးတဲ့အထညျကို သိနျးခြီဖိုးအားပေးတယျ..။
အဲ့တော့သူငှကွေိုလှဲဖို့လိုရော လိုတော့သူကမနကျစောစော ငှလှေဲလိုကျတယျထငျပါတယျ ကြှနျမကို ဖုနျးတှဆေကျပါ လရေော…. မကိုငျမခငျြးဆကျတာ … ကြှနျမ အကငျြ့ကလညျး လိုငျးမပိတျတဲ့အကငျြ့ (ခုတော့လိုငျးပိတျအိပျနပွေီ😄) ဖုနျးကို ခေါငျးနားထားအိပျတဲ့အကငျြ့ (ထားတုနျးပဲ ဖုနျးတော့😛) သူက တဂှမျဂှမျဆကျ ကိုယျက ညကမအိပျမိုးလငျးမှအိပျရနဲ့ ဆကျတိုကျ ဆကျတိုကျ ဆကျပါမြားတော့ (မနကျ၈နာရီလောကျကနေ ၁၁ နာရီလောကျထိ) မအိပျရတဲ့စိတျနဲ့ တဒင်ျဂ ဒေါ သက စပါလရေောဖုနျးကိုငျပွီး ဘယျသူဒီလောကျဆကျနလေဲ ကွညျ့တော့ ငှလှေဲထားတာဝငျလား စဈပေးပါတဲ့ 😩 ကြှနျမလညျး လူကပုတော့ စိတျကလညျးသိ တယျမလား 😖 အမရယျလို့ ကြှနျမက blue mark ကွီးနဲ့ ရောငျးနတောပါလို့ အမငှကေိုကြှနျမလိုငျးသုံးတာနဲ့စဈပွီး အကွောငျးပွနျထားမှာပေါ့လို့ တဈဖကျက လညျးကြှနျမကလညျး ကြှနျမငှလှေဲထားတာလတေဲ့ ဝငျမဝငျ သိခငျြတယျတဲ့ စသဖွငျ့ အနညျးငယျလောကျ စကားလေးတှေ အဆငျမပွတေ့ပွပွေောကွတယျ နောကျဆုံး customer right မို့ ကြှနျမကပဲ စကားလုံးလေးတှေ ခြိုတဲ့ဘကျပွောငျးပွီး ရပျလိုကျရတယျတကယျ့တကယျ ပွနျစဉျးစားကွညျ့တော့ သူမှနျတယျ..။
ကြှနျမညမအိပျဘဲအလုပျလုပျနတော သူမသိဘူးသူ့ကိစ်စလညျးမဟုတျဘူး သူ့ကိစ်စကသူ့ငှသေူတနျဖိုးထားတဲ့ ငှကေိုဘာပစ်စညျးမှ လကျမခံရသေးဘဲ ကွိုလှဲရတာ ဝငျ ကွောငျးသကျသလေိုခငျြတယျ ဖွဈသငျ့တယျကိုယျ့အတှကျ ၁ သိနျး ၂ သိနျးက တနျဖိုးရှိခငျြလညျးရှိမယျ ရှိခငျြမှလညျးရှိမယျဆိုပမေယျ့ တဈဖကျလူအတှကျတနျ ဖိုး အရမျးရှိနနေိုငျတယျဒါကို တဈဖကျလူရဲ့နရောကို မကွညျ့ဘဲ ငါညကမအိပျရဘူးမနကျမှ အိပျရတာကိုဘာလို့ဒီလောကျဖုနျးဆကျနတောလဲ မသိဘူးနဲ့ ကိုယျ့အ တှကျ ကိုယျကွညျ့ပွီးတဒင်ျဂစိတျနဲ့တုံ့ပွနျမိခဲ့တာ ပွနျတှေးကွညျ့တော့ ကြှနျမမှားတယျနောကျနောငျလညျး အမွဲ သူ့ဖကျ ကိုယျ့ဖကျ ကွညျ့ပွီး တဒင်ျဂ ဒေါသကို မ ထှကျဘဲ နနေိုငျအောငျ သတိထားရမယျအဲ့တုနျးက ဖွဈခဲ့တဲ့အမ ဘယျသူလညျးတော့ မမှတျမိတော့ပမေယျ့ အမက ဒီစာလေးဖတျမိလို့ မှတျမိရငျ ညီမကပဲ တောငျးပနျပါတယျ နျော ☺️☺️☺️ Peace နျောအမနောကျစြေးရောငျးလညျး အားပေးနျောဘာရောငျးရမလဲတော့ မသိသေးဘူး 😂 P.S ပုံက မကျြနှာငယျ လေးနဲ့တောငျးပနျနတောပေါ့ 😔😜 ” လို့ ရေးထားပါတယျ ပရိသတျကွီးရေ။ဖတျရှုပေးကွတဲ့ပရိတျသတျကွီးအားလုံးလညျး သာယာပြျောရှငျတဲ့နလေ့ေးတဈနကေို့
အသက် (၃၀) ပြည့်အတွက်ရည်မှန်းထားတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ကို ပြောပြလာတဲ့ နေခြည်ဦး
အိမ်အလုပ်တွေကူလုပ်ပေးနေတဲ့ ချစ်သူသားဂန်းကို ဗီဒီယိုခိုးရိုက်ပြီး ချစ်မဝနိုင်ဖြစ်နေတဲ့ ဘေဘီမောင်